Xildhibaan Fowsiyo: Canaanta Madaxweyne Yoweri Museveni yaan loo arkin colaad – Kalfadhi
Xildhibaano katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa siyaabo kala gidisan uga hadlay hadalkii maalmo kahor ka soo baxay Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ee ahaa, Somaliya kama jirto dowlad shaqeysa oo hey’adaheeda dhamestiran yihiin kaas oo noqday hadal heyntii ugu balaarneed ee maalmahaan ka taagan magaalada Muqdisho.
Xildhibaanadaan oo qaarkood Warbaahinta ka soo muuqday ayaa qaar ka mid ah waxay sheegeyn in uusan saameyn weyn lahayn hadalka Yoweri Museveni balse dadka Soomaaliyeed ay macno kale u yeelayaan hadalkiisa, halka qaar kalane ay ku tilmaameyn gaf iyo meel ka dhac loo geestay Shacabka iyo Dowladda Soomaaliyeed.
Xuseen Carab Ciise, oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya sidoo kalane ah Guddoomiyaha Guddiga Difaaca ee Golaha Shacabka ayaa aad u dhaliilay hadalkii Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni . Xuseen Carab Ciise ayaa sheegay in Soomaaliya ay leedahay Dowlad shaqeysa oo aduunka laga aqoonsan yahay waxa uuna warka Museveni ku tilmaamay war aan laga fiirsan.
“Waxaan nahay dal ay ka jirto Dowlad shaqeysa, aduunka ayaa laga aqoonsan yahay Dowladda Soomaaliya waxaana u dhameestiran hey’adihii Dowladnimo”, ayuu yiri Xildhibaan Xuseen Carab Ciise. “Uganda halkaan waxaa u jooga Safiir, annagana waxaa noo jira Safiir dalka Uganada, Safiiro waxaa isu dirsada Dowlado, hadii aysan Soomaaliya Dowlad ka jirin muxuu qabanayaa Safiirkooda”, ayuu is weydiiyay Xuseen Carab Ciise Guddoomiyaha Guddiga Difaaca ee Golaha Shacabka.
Xildhibaan Xuseen Carab Ciise ayaa sheegay in Soomaaliya ay abaal-weyn u heyso Dowladda, Shacabka iyo Madaxweynaha Uganda balse aysan ku habooneen in Yoweri Museveni uu sidaas kula hadlo Shacabka Soomaaliyeed ee uu abaalka weyn u galay. “Abaal wayn ayaa u heynaa Uganda iyo madaxdeeda, waxay noo hureen dhiigga Wiilashooda, balse maaheyn in Soomaaliya war nuucaas ah ku dhaho”, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Xuseen Carab Ciise.
Xildhibaan Fowsiyo Yuusuf Aadan oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidoo kale ka hadashay hadalkii ka soo baxay Madaxweynaha dalka Uganda Museveni ee ku aadanaa Dowladda Soomaaliya. “Waxaa nasiib darro ah in markale lagu deg dego tallaabo laga qaado hey’adaha ama dowladaha u heelan taakuladeenna iyo ilaalinta nabadgalyadeyna”, ayey tiri Xildhibaan Fowsiyo Yuusuf Xaaji aadan oo qoraal soo dhigtay barteeda Facebook.
Dowladda Uganda ayey sheegtay in Soomaaliya ay u gashay abaal badan islamarkaana y u daadisay dhiig badan. Sidoo kale waxay sheegtay in Uganda ay Soomaaliya soo caawisay waqti ay aad u adkeyd in lahelo Dowlad Soomaaliya caawisa. “Uganda waxay noo daadisay dhiig badan, ilaa hadana way na garab taagan tahay, ma, ahan in canaanteeda aan u aragno colaad”, ayey qoraalkeeda ku soo gaba-gabeysay Xildhibaan Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan oo katirsan Baarlamaanka Soomaaliya.
Hore ayaa sidaan oo kale arintaan waxaa uga hadlay Xildhibaano, Siyaasiin iyo mas’uuliyiin kalaba waxayna u muuqataa in aad loogu kala aragti duwan yahay hadalka Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni. Wasiirka Arimaha Dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa shalay sheegay in hadalkii Yoweri Museveni uu ahaa nin iska hadlay, dad badan oo Diblomaasiyadda ka faalooda waxay ku tilmaameyn hadalka Wasiirka mid aysan Uganda ka mudneen Soomaaliya.